मिडिया जुन सुकैहोस चित्त नबुझेर ब्याण्ड गर्नु भनेको मिडियामा कन्ट्रोल गर्ने मनोविज्ञानलाई बढावा दिनु हो ।’ पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष आचार्य – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/मिडिया जुन सुकैहोस चित्त नबुझेर ब्याण्ड गर्नु भनेको मिडियामा कन्ट्रोल गर्ने मनोविज्ञानलाई बढावा दिनु हो ।’ पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष आचार्य
नेपालको भारतीय मिडियाहरुले जसरी नेपाल विरोधी गतिविधी गर्दै आईरहेको छ । त्यसको नेपाल सरकारले नेपालमा भारतीय च्यानलहरुलाई बन्द गरेर जवाफ दिएको छ । नेपाल विरुद्ध रिर्पोट बनाएकै आधारमा भारतीय च्यानहरुको प्रसारण नेपालमा बन्द भएपछि उक्त च्यानलले माफी मागेको छ । माफि मागेतापनि नेपालमा केही भारतीय मिडिया र पत्रकारलाई हेर्न दृष्टिकोरण भने उही नै रहेको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको चरित्र नै हत्या गर्ने उद्येश्यले भारतीय मिडियाले गरेको गोडी पत्रकारीता र त्यसको नेपाल लगाएत विश्वमा कस्तो असर पर्छ ? नेपालका प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा गलत प्रचार गरेको भन्दै नीजि क्षेत्रका केवल प्रसारक संघहरुले झण्डै २ दर्जन भन्दा बढी भारतीय मिडियालाई नेपालमा प्रसारण हुनबाट रोक लगाउनु सही कि गलत भन्ने जस्ता विषयमा लामो समयदेखि नेपालको पत्रकारीतामा आबद्ध रहेर अहिले पनि सक्रिय रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष सुरेश आर्चायसंग ताजाखबरले कुराकानी गरेको छ । सोही कुराकानीको केही अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
भारतीय मिडिया जि बिहारले नेपालका प्रधानमन्त्री र चिनीयाँ राजदुतको सम्बन्धलाई लिएर जुन प्रकारले रिर्पोट बनायो । यस्ले भारतीय मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोरण अबका दिनमा कस्तो हुन जान्छ ?
यो विषयमा म के भन्न चाहान्छु भने, कुनै एउटा घटना विशेषले गर्दा त्यसलाई समग्रतामा हेर्ने भन्ने कुरा पक्कै पनि हुँदैन । तर के हुन्छ भने खासगरी भारतीय टेलीभिजन पत्रकारीताको कुरा गर्ने हो भने त्यसको कुनै स्ट्याण्डरता छैन । यो कुरा आजको मात्र होईन । आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा गरिएको कुराको मात्र होईन । हिजोका दिनमा पनि विभिन्न घटना क्रमहरुलाई हेर्ने हो भने भारतीय टेलीभिजनले कहिल्यै पनि पत्रकारीताका मूल्य, मान्यता र मापदण्डमा रहेका पत्रकारीता गरेको देखिंदैन ।
त्यसैले अहिलेको यो एउटा घनामा के भन्यो या भनेन भन्नु भन्दा पनि सम्रगमा भारतीय टेलीभिजनहरु हिजोका दिनमा पनि चलेका थिएनन्, आजको दिनमा पनि चलेका छैनन् र भोलीका दिनमा पनि चल्छन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन । अहिले उनीहरुले कुन स्वार्थले गरे त्यो प्रसंगले थाहा होला । विशेषगरी भारतीय मिडियालाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं एउटै रहेको छ त्यो हो उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्दैनन् । एउटा प्रसंगमा उनीहरुमा कन्टेनटमा जेसुकै भएपनि राष्ट्रियताका विषयमा भने ईण्डियन मिडियाले आफुहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउने गरेका छन् । तर त्यो कथित राष्ट्रियताको नाममा गलत सूचना दिने र अखवाह फैलाउने काममा भारतीय मिडियाहरुको भूमिका रहंदै आएको देखिन्छ ।
चिनीयाँ राजदुतसंग नाम जोडेर जसरी भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास ग¥यो । त्यसैका आधारमा सरकारले तत्काल दुई दर्जन भन्दा बढी भारतीय च्यानलहरुलाई नेपालमा प्रसारण हुनबाट रोक लगायो । सरकारको यो कदम ठीक या बेठीक ?
यो विषयमा म अलि फरक धारणा राख्दछु । मैले धेरै पत्रकार साथीहरु र बुद्धिजीविहरुको कुरा पनि सुनें । सबैको भनाई लगभग लगभग प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयसंग मिल्न जान्छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमा उहाँहरु सबैको सहमति रहेछ भन्ने मैले पाएँ । उहाँहरुले भारतीय टीभी च्यालनहरु नेपालमा बन्द नै गरिनु पर्छ । आउन दिनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्नु भयो । हामी कहाँ नआएर के भयो त ? उनीहरुले गर्ने प्रचारले उनीहरुकै भारतीय जनमत बनाउन त सहयोग गरिरहेको हुन्छ । बरु हामीले नहेर्दाखेरी के हन्छ भने उनीहरुले हाम्रा विरुद्ध के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा जान्नबाट हामी बञ्चित हुन जान्छौं । जब हामी बञ्चित हुन्छौं तब उनीहरुले हाम्रा विरुद्ध के गर्दा रहेछन् भनेर त्यसको प्रतिबाद गर्ने कुरालाई नै हामीले ब्लग गर्न खोजेका छौं ।
जस्तो अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं । त्यो कुरा नेपाली आकाशमा भारतीय च्यानल आएकै कारणले र नेपाली घरघरमा पुगेकै कारणले त्यसले हाम्रो राष्ट्रियतामा कम्जोर बनाएको छैन । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कम्जोर बनाएको छैन । बरु हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो प्रधानमन्त्रीप्रति नेपालीको भावनालाई एकत्रीत गरेको छ । त्यसले नेपाली नेपालीमा फुट ल्याउने काम त गरेको छैन । त्यसो भएको हुनाले म यो कुनै पनि मिडियामाथिको कुनै पनि प्रतिबन्धको पक्षमा छैन । त्यो नेपालको सरकारले गरोस्, या नेपालका मिडियामाथि गरोस्, अथवा अरु अन्तराष्ट्रि सरकारले नेपालका मिडियालाई गरुन् । म यो पक्षमा छैन । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो मर्यादित हुँदैन कुनै पनि मिडिया भने त्यसलाई हेर्ने या नहेर्ने, पत्याउने, नपत्याउने, जजमेन्ट गर्ने नगर्ने स्थितिमा नागरिक आफैं पुग्छ । जे गरियो त्यो निकै नै गजब भयो भन्ने पक्षमा म नभएको हुनाले सरकारले गरेको यो निर्णय बेठीक नै ग¥यो भन्छु म । यस्ले कालन्तरमा के गर्न सक्छ भने चित्त नबुझेको हरेक मिडियामा कन्ट्रोल गर्ने मनोविज्ञानलाई बढाउँछ । त्यसैले म यसको पक्षमा छ्रैन ।
उसो भए नेपाल सरकारले भारतीय च्यानलाई नेपालमा प्रतिबन्ध नगरिकन के गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो होला त ? तपाँईको विचारमा ।
यो राम्रो प्रश्न हो । यस्मा नेपाल सरकारले के गर्न सक्थ्यो भने यो गलत भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चरित्र नै हत्या गर्नु भनेको त भारतीय मिडियाले हाम्रो देशको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय खण्डतामाथि नै टेकेर धावा बोल्नु हो नि भनेर हाम्रा मिडियाहरुलाई त्यो गलत कुराहरुका बारेमा कसरी अन्तराष्ट्रिय मिडियासम्म पु¥याउन सकिन्छ त्यो ढंगबाट परिचालन गर्न सक्नु पथ्र्यो । नकि भारतीय मिडियालाई नै रोकेर यस्का समाधान खोजिने । नेपाल सरकारले भारतीय च्यानललाई रोकेर ठीक ग¥यो भन्ने मलाई लागेको छैन